Zimbabwe - Topic - Digital Journal
Harare	- Zimbabwe's former leader Robert Mugabe stepped down on November 21, 2017, bringing an end to nearly four decades of iron-fisted rule.His resignation came days after military tanks rolled through the capital Harare.
New York	- Zimbabwe's leader on Thursday appealed at the United Nations for support to end Western sanctions, saying that they set back development goals.
Harare	- Opposition politician Jacob Ngarivhume and award-winning journalist Hopewell Chin'ono were granted bail on Wednesday at their fourth attempt after being detained in July for calling for protests.
Harare	- Zimbabwe's government has accused the head of a Catholic bishops congress of stoking division and seeking to create a "genocide" after the group spoke out against alleged rights abuses and economic woes.
Harare	- Zimbabwean President Emmerson Mnangagwa on Tuesday warned he would "flush out" what he called "bad apples" as rights groups reported dozens of activists had been arrested in a broad crackdown on dissent.
Harare	- Zimbabwean top writer and Booker Prize nominee, Tsitsi Dangarembga was freed on bail on Saturday following her arrest during anti-government protests a day earlier.
Zimbabwe author Tsitsi Dangarembga arrested during banned protests
Harare	- Police in Zimbabwe on Friday arrested internationally-acclaimed novelist Tsitsi Dangarembga as they enforced a ban on protests coinciding with the anniversary of President Emmerson Mnangagwa's election.
Harare	- Award-winning Zimbabwean novelist Tsitsi Dangarembga was arrested during anti-government protests on Friday, an AFP photographer saw.
Harare	- Police and soldiers mounted checkpoints on empty streets in Harare on Friday after the Zimbabwean authorities warned of a crackdown on the eve of planned protests.
Washington	- The United States on Tuesday summoned Zimbabwe's ambassador after the ruling party insulted the US envoy in Harare and accused him of fomenting anti-corruption protests.
Harare	- Zimbabwe on Monday began enforcing a three-week lockdown in its fight against coronavirus after the disease left one person dead and infected six others.
Harare	- Doctors in Zimbabwe's public hospitals have gone on strike over lack of protective gear against the novel coronavirus, joining thousands of nurses who walked out of the wards this week, their association said Thursday.
Hwange	- Zimbabwean villager Dumisani Khumalo appeared to be in pain as he walked gingerly towards a chair under the shade of a tree near his one-room brick shack.The 45-year-old was attacked by a buffalo days earlier, and he was lucky to be on his feet.
Harare	- Fanuel Mapfumo has been unable to lift heavy objects since a Zimbabwe police officer fractured his left arm as he was covering a story last August.The 28-year-old journalist was filming a banned protest in the capital Harare when it happened.
Harare	- The floor is dusty, the walls filthy and the furniture decrepit, but for two weeks last month a tiny flat in a Harare township was transformed into a maternity clinic where scores of babies were born.
Harare	- Zimbabwe's late former president Robert Mugabe left US$10 million, 10 cars, a farm and two houses, details of his estate released on Tuesday revealed.
Harare	- Zimbabwe is facing "man-made" starvation with 60 percent of the people failing to meet basic food needs, a UN special envoy said Thursday after touring the southern African country.
Harare	- Zimbabwean riot police fired tear gas and beat opposition supporters on Wednesday after barring a planned address by the main opposition leader, Nelson Chamisa, AFP journalists said.
Harare	- Two years ago, Linos Mutepera was among hundreds of thousands of Zimbabweans who celebrated the toppling of long-time ruler Robert Mugabe with tears of joy.
Harare	- Zimbabwe’s wildlife agency said Monday it would move hundreds of elephants and other animals in a dramatic bid to save them from a lethal drought.
Harare	- Chiyevedzo Mutero was one of dozens competing in the remote Zimbabwean bush to join the all-female anti-poaching Akashinga rangers when she broke her finger.
Harare	- Zimbabweans staged a mass government-orchestrated protest on Friday against sanctions imposed by the US and the European Union during the despotic rule of late leader Robert Mugabe.
Harare	- Zimbabweans staged a mass protest on Friday against sanctions imposed by the US and the European Union during the despotic rule of late ex-leader Robert Mugabe.
Harare	- After weeks of delays Zimbabwe's former ruler Robert Mugabe was finally buried over the weekend, closing a battle between the state and his family over the fate of his remains.
The body of Zimbabwe's former president Robert Mugabe was buried on Saturday in a low-key ceremony in his home village after weeks of wrangling over his final resting place.
Harare	- Robert Mugabe used repression and fear to hold on to power in Zimbabwe for 37 years until he was finally ousted when his previously loyal generals turned against him.
Harare	- Data on health, economics, corruption, press freedom and migration reveal much about Robert Mugabe's 37-year rule. He died aged 95 in Singapore on September 6, nearly two years after he was ousted by the military in 2017.
apis-429581 apis-429330 apis-426156 apis-424714 apis-423736 apis-423665 apis-422981 apis-422873 apis-422811 apis-422808 apis-422806 apis-422564 apis-415880 apis-415678 apis-411111 apis-410428 apis-408950 apis-408892 apis-408638 apis-408132 apis-408101 apis-407765 apis-407492 apis-406774 apis-406405 apis-406402 apis-404672 apis-404576 apis-404464 apis-404458
Four people have been arrested in Zimbabwe for trying to smuggle 28 sable antelopes, including six calves into South Africa.
Map showing Masvingo Province of Zimbabwe
Senator Muzerengwa (of Buhera) and Hon. Roy Bennett, at an MDC rally in August, 2009 in Sakubva, Zimbabwe
Invitation: Peter Godwin and Roy Bennett in conversation about recent developments in Zimbabwe. Thursday, 18th November, 2010 @ 6PM, Wits University, Johannesburg, SA. Please RSVP at muniera@panmacmillan.co.za or SMS 078 804 0591.
Zimbabwe’s Malilangwe Wildlife Reserve
Victoria Falls on the Zambia-Zimbabwe border. Looking at this image and accompanying natural sounds could be key to reducing pain in cancer patients during treatment.
Flooding in Zimbabwe has left thousands of people without food or clean water.
Kariba dam wall photographed from the Zimbabwean side
A woman stands outside of her temporary home and dried up maize crop in Epworth, in Harare, Zimbabwe
This female, one of 24 elephants airlifted from Zimbabwe to China in July 2015, suffered a wound while housed in the Qingyuan quarantine facility.
The flag of Zimbabwe has the bird on a pedastal, as does Zimbabwe's Coat of Arms.
In Zimbabwe, humans and livestock are starving.
Zimbabwe was once known as the breadbasket of Africa, but perennial shortages now mean that many villagers rely on food aid from the World Food Programme
Satellite image of the flooded area by Unitar UNOSAT